Virage GNU / Linux: iyo Spanish distro yekushanda neodhiyo nevhidhiyo | Linux Vakapindwa muropa
Isaac | | Kugoverwa, GNU/Linux, Multimedia
Virage GNU / Linux iri kugovera kweSpanish kunoenderana naDevuan, iyo sekuziva kwako ndeyeDebian GNU / Linux isina systemd, ndiko kuti, inoenderera neSysV init. Kune vateveri venyika yeUnix iwe uchafarira ruzivo urwu, uye kune avo vese vanopokana nekuoma kwesystemd.
Asi iyi distro haisi yekuparadzira yakagadzirirwa kushandiswa kwese, kunyangwe iyo yakagadziriswazve kushanda nemafaira kubva odhiyo nevhidhiyo, ndiko kuti, kushanda ine multimedia. Nzvimbo huru yebasa yakagadzirira kushandisa neiyi kuburitswa yeyakagadzikana vhezheni yeVirage GNU / Linux iyo iwe yaunogona kurodha pasi kubva webhusaiti yepamutemo yeprojekti. Ikoko iwe uchaiwana mune yayo Yakagadzika vhezheni yekutora iyo ISO ye 64-bit makomputa, ese ari maviri masisitimu ane BIOS uye eEFI.
Iyo inowanika ISO chifananidzo inobata nezve 1.3 GB uye inobvumidza kubhowa muhupenyu mode, ndiko kuti, kwe gadzira bootable Rarama midhiya uye edza iyo pasina kuisa. Iyi nzvimbo inosanganisira akasiyana maapplication ekushanda nevhidhiyo dzakasiyana siyana uye odhiyo, pamwe nehuremu XFCE 4.1 desktop nharaunda uye Linux 4.9 kernel. Iwe zvakare une 100% yemahara vhezheni, yakafanana nevanilla, asi isina yemabhurumu mabhurumu uye software yekudyara, yevanonyanya kuda rusununguko (neLinux kernel 4.19.59-gnu-rt24 ine zvigamba nePREEMPT_RT yeicho chaicho-nguva mashandiro emamwe mabasa. nezwi).
La kuisirwa kuri nyore uye hakudi magadzirirwo akaomarara, sezvo mafaera ese epamoyo akave akanyatsogadziriswa kuti agadzirise sisitimu uye kuve neyakanakisa mamiriro ekugadzirisa odhiyo uye mashandiro akanaka emabasa ayo akagadzirirwa.
Kubva kuLxA tinokukurudzira kuti uedze iyi distro. Uye iwe unoziva, unogona tsvaga rumwe rubatsiro, kurodha pasi, kupa mipiro kuchirongwa, nevamwe, pane webhusaiti yepamutemo ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Virage GNU / Linux: iyo Spanish distro yekushanda neodhiyo nevhidhiyo
Mumwe mubvunzo, kana ukauya usina yakavanzika software, uchagadzirisa sei vhidhiyo, odhiyo, nezvimwe? Izvo zvese chete nemahara mafomati?
Mumwe mubvunzo, unosanganisirawo graphic edhisheni zvirongwa zvemifananidzo dhizaini?
Pamubvunzo wako wekutanga, hongu. Kana iwe uchida zvakavanzika macodec uye nevamwe, unofanirwa kuzviisa wega.
Pane wechipiri, pamwe neizvi zvichajeka.